Lahatsoratra momba ny Fibromyalgia
Fibromyalgia dia aretina mitaiza fanaintainana izay matetika manome ny fototry ny soritr'aretina isan-karazany sy famantarana ara-pahasalamana. Eto ianao dia afaka mamaky misimisy kokoa momba ireo lahatsoratra isan-karazany nosoratanay momba ny fibromyalgia momba ny fanaintainana mitaiza - ary tsy ny kely indrindra ny karazana fitsaboana sy ny fizakan-tena azon'ity diagnostika ity.
Fibromyalgia dia fantatra ihany koa hoe rheumatism marefo. Ny fepetra dia mety ahitana soritr'aretina toy ny fanaintainan'ny fanaintainana eo amin'ny hozatra sy ny tonon-taolana, havizanana sy fahaketrahana.
Torohevitra 7 mba hiaretana amin'ny Fibromyalgia
13 / 06 / 2017 /1 Comment/i aretin-kozatra, Ny fanaintain'aretina/av loza
Tadiavo aretin-kozatra sy fandehanana eny amin'ny rindrina? Ndao hanampy anao.
Ny Fibromyalgia dia mety hiteraka fanamby lehibe amin'ny fiainana andavan'andro. Mety ho sarotra tsotra izao ny fisian'ny aretin'ny fanaintainana mitaiza. Ireto misy torohevitra sy fepetra 7 afaka manampy anao hanamaivanana ny soritr'aretin'ny fibromyalgia ary hanamora ny andronao.
- Miara-mitombo ny fahatakarana ny aretin'ny fanaintainana mitaiza
Maro amin'ireo manana fanaintainana mitaiza no mahatsapa fa tsy henoina na tsy raisina ho zava-dehibe. Tsy azo avela ho toy izany. Miara-miombon'antoka amin'ireo tratry ny fanaintainana mitaiza izahay ary miangavy anao hizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy mba hahazoana fahalalana bebe kokoa momba ity aretina ity. Misaotra mialoha. Aza misalasala manaraka anay amin'ny alalan'ny Facebook og YouTube.
- Ao amin'ny departemanta interdisciplinary ao amin'ny Vondtklinikkene any Oslo (Lambertseterary Viken (Eidsvoll Sound og Råholt) Ny mpitsabo anay dia manana fahaiza-manao matihanina miavaka amin'ny fanombanana, fitsaboana ary fanofanana fanarenana ny fanaintainana mitaiza. Miaraka aminay dia ho raisina ho zava-dehibe foana ianao. Tsindrio ny rohy na eto raha te hamaky bebe kokoa momba ny departemantantsika.
Mandehana midina hijerena horonan-tsary roa fanatanjahan-tena miaraka amin'ny fanazaran-tena sy teknika fialan-tsasatra mety hanampy anao amin'ny fibromyalgia.
Vokany? Midira ao amin'ny vondrona Facebook «Rheumatism - Norvezy: Fikarohana sy vaovao»Ho an'ny fanavaozana farany momba ny fikarohana sy ny fanoratana ny media momba an'io sy ny aretina hafa. Eto, ny mpikambana dia afaka mahazo fanampiana sy fanohanana - isaky ny andro ihany - amin'ny alàlan'ny fifanakalozana ny zavatra niainany sy torohevitra.
Ny fihenjanana dia mety miteraka ary miteraka "flare ups" amin'ny fibromyalgia.
Ny fampihenana ny adin-tsaina amin'ny fiainana andavanandro dia mety hitarika amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiainana ary tsy dia misy soritr'aretina. Ny fomba sasany aroso amin'ny fiatrehana ny adin-tsaina dia ny yoga, ny fahatsiarovan-tena, ny acupressure, ny fanatanjahan-tena ary ny fisaintsainana. Ireo teknika fofonaina ary fifehezana ny teknika toy izany dia mety hanampy koa.
- Makà fotoana hialana voly
Mianara manamaivana ny tenanao amin'izao andro maoderina izao izay mametraka fenitra ambony. Manoro hevitra mafy izahay hanao fotoam-pialan-tsasatra isan'andro tsihy akupresy (tsindrio eto raha te hamaky bebe kokoa - misokatra amin'ny varavarankely vaovao ny rohy). Ity variana ity koa dia misy ondana misy vozony izay manamora ny fiasana amin'ny hozatra mihenjana ao amin'ny lamosina ambony sy ny tendany
Vakio koa: Fandrika malaza 7 izay manamafy ny fibromyalgia
Kitiho ny rohy etsy ambony mba hamaky ilay lahatsoratra.
2. Fiofanana namboarina tsy tapaka
Ny fanatanjahan-tena miaraka amin'ny fibromyalgia dia mety ho tena sarotra.
Na izany aza, ny karazana fanatanjahan-tena sasany dia mety miasa tsara - toy ny fanatanjahan-tena tsy tapaka sy ambany, toy ny mandeha na manao fanatanjahan-tena amin'ny dobo rano mafana dia anisan'ny fitsaboana tsara indrindra amin'ny fibromyalgia.
Afaka manampy anao hampihena ny fanaintainana sy ny hamafisina izany, ary koa hanome anao fifehezana ny fitomboan'ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny fanaintainana. Miresaha amin'ny dokoteranao, ny mpitsabo ara-batana anao, ny kiropraktika anao na ny mpitsabo iray hahitanao ny karazana programa fanatanjahan-tena mety indrindra ho anao - faly koa izahay manampy anao amin'ny alàlan'ny fantsona Youtube na ny iray amin'ireo toeram-pitsaboana interdisciplinary raha tianao.
Ny Fibromyalgia dia miteraka fanaintainan'ny fanaintainana sy saro-pady amin'ny hozatra sy tonon-damosin'ny vatana. Ity misy programa fanatanjahantena dimy fanazaran-tena izay afaka manampy anao hitazona ny lamosinao, ny andilana ary ny pelvis. Tsindrio etsy ambany hahitana ny fanazaran-tena.
VIDEO - Fanatanjahan-tena 7 ho an'ny Rheumatists:
Tsy manomboka ve ilay horonantsary rehefa manindry azy ianao? Manandrama manavao ny navigateur na Jereo mivantana amin'ny fantsona YouTube izahay. Aza adino koa ny misoratra anarana - maimaimpoana tanteraka - amin'ny fantsona raha mila programa sy fampiofanana tsara ianao.
3. Fandroana mafana
Faly ve ianao miala voly amin'ny rano mafana? Mety hahasoa anao izany.
Ny fandriana amin'ny rano fandroana dia mety mahatonga ny hozatra ho miala sasatra ary ny fanaintainana miala aina kely ny tafo. Ity karazana hafanana ity dia afaka mampiakatra ny haavon'ny endorphin ao amin'ny vatana - izay manakana ny famantarana fanaintainana ary mety hitarika amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny torimaso. Raha tsy izany dia manoro hevitra ny fampiasana ny fonosana hafanana azo ampiasaina indray (jereo ohatra eto - misokatra amin'ny varavarankely vaovao ny rohy). Ny fonosana dia miasa amin'ny fanafanana azy ary avy eo mametraka azy amin'ny hozatra mihenjana sy marary.
4. Hetezo ny kafe
Tia kafe mahery ve ianao? Mety ho fahazaran-dratsy ho antsika manana fibra izany indrisy.
Ny kafeina dia manaitaitra foibe- izay midika fa mandrisika ny fo sy ny rafi-pitabatabana afovoany mba ho mailo kokoa. Rehefa nasehon'ny fikarohana fa miaraka amin'ny fibromyalgia dia manana fibra nerveo be loatra isika, dia tsapantsika fa tsy voatery ho tsara indrindra izany. Saingy tsy hanaisotra tanteraka ny kafeo aminao izahay - mety ho tena ratsy tokoa izany. Aleo miezaha miala kely.
Izany dia mety hiafara amin'ny torimaso sy ny tebiteby tsy dia ambany loatra. Noho izany, andramo ny hamerana ny fisotroana kafeinina, satria ireo manana fibromyalgia dia efa manana rafi-pitatitra mahery vaika. Ny tena zava-dehibe dia ny fisorohana ny fisotroana kafe sy angovo manomboka amin'ny tolakandro. Angamba azonao atao ny manandrana mifindra amin'ny safidy decaffeinated?
Vakio koa: Ireo no karazany 7 fanaintainan'ny Fibromyalgia fanaintainana
Manokana fotoana kely ho anao - isan'andro isan'andro
Ny tena fotoana dia mety manan-danja lehibe ho antsika amin'ny fibromyalgia.
Ny Fibromyalgia dia mety hanasarotra ny fiainana amin'ireo fanamby rehetra apetrany aminao, koa ataovy izay hanokana fotoana ho anao isan'andro ho anisan'ny fikarakarana ny tenanao. Ankafizo ny fialambolinao, mihaino mozika, miala sasatra - ataovy izay hahatsapanao ho tsara kokoa.
Ny fandokafan-tena toy izany dia afaka mampandanja kokoa ny fiainana, mampihena ny fihenjanan-tsaina ao amin'ny vatanao ary manome anao tanjaka bebe kokoa amin'ny fiainanao andavan'andro. Angamba fitsaboana fitsaboana isam-bolana (ohatra, fitsaboana ara-batana, kiropraktika maoderina na tsindrona volamena?) koa mety ho hevitra tsara koa?
6. Miresaka momba ny fanaintainana
Aza miaro ny aretinao. Tsy mety ho anao io.
Be loatra ny olona manana fibromyalgia mandeha ary mitazona ny fanaintainana ho azy ireo - mandra-pahatongan'izany tsy misy intsony ary raikitra ny fihetseham-po. Ny fibromyalgia dia miteraka fihenjanana ho anao, fa koa ireo manodidina anao - noho izany ny fifandraisana no lakileny.
Raha tsy salama ianao - dia lazao izany. Lazao fa tsy maintsy manana fotoana malalaka ianao, fandroana mafana na mitovitovy amin'izany satria izao no zava-misy fa ny fibromyalgia dia eo amin'ny fara tampony. Mila fantatry ny fianakaviana sy ny namanao ny aretinao ary io vao mainka maharatsy io. Amin'ny fahalalana toy izany dia mety ho ampahany amin'ny vahaolana izy ireo rehefa mila fanampiana.
7. Mianara miteny TSIA
Fibromyalgia dia antsoina matetika hoe 'aretina tsy hita maso'.
Izany no iantsoana azy satria mety ho sarotra amin'ny manodidina anao ny mahita fa mijaly ianao na mijaly amin'ny fahanginana. Eto dia tena zava-dehibe ny mianatra mametraka fetra ho an'ny tenanao sy izay azonao leferina. Tokony hianatra hiteny TSIA ianao raha misy olona te hanana ampahany betsaka aminao any am-piasana sy amin'ny fiainana andavanandro - na dia mifanohitra amin'ny toetranao manampy sy ny soatoavinao lehibe aza izany.
Mamporisika ireo rehetra manana an'io aretina io izahay mba hanatevin-daharana ny vondrona Facebook «Rheumatism - Norvezy: Fikarohana sy vaovao»- Eto ianao dia afaka miresaka momba ny toe-javatra iainanao sy mahazo torohevitra tsara avy amin'ny olona mitovy fisainana aminao.
Aza misalasala mizara amin'ny Media Sosialy
Averina indray, ka tianay å mangataha tsara mba hizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy na amin'ny alàlan'ny bilaoginao (aza misalasala mifandray amin'ny lahatsoratra). Ny fahatakarana sy ny fitomboan'ny fifantohana no dingana voalohany mankany amin'ny fiainana andavanandro tsara kokoa ho an'ireo izay manana fanaintainana maharitra.
Soso-kevitra hanampy ny fibromyalgia sy ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny fanaintainana:
Safidy A: Mizara mivantana amin'ny FB - Adikao ny adiresy tranokala ary apetaho ao amin'ny pejy facebook anao na ao anaty vondrona facebook misy ifandraisany amin'ny maha mpikambana anao. Na tsindrio ny bokotra "SHARE" etsy ambany raha hizara bebe kokoa ny lahatsoratra amin'ny facebook.
Hikasika ity mba hizarana fanampiny. Fisaorana lehibe ho an'ny rehetra izay manampy amin'ny fampiroboroboana ny fahatakarana ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny fanaintainana sy ny fibromyalgia!
Manolotra fanombanana maoderina, fitsaboana ary fanofanana fanaintainana mitaiza izahay.
NEXT PAGE: 5 Fanazaran-tena ho an'ireo manana Fibromyalgia
Kitiho ny sary na rohy etsy ambony.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/7-TIPS-FOR-Å-HOLDE-UT-MED-FIBROMYALGI.jpg?media=1648573622 368 700 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2017-06-13 20:07:332022-03-22 16:15:26Torohevitra 7 mba hiaretana amin'ny Fibromyalgia
Pejy 1 amin'ny 11123>»